‘सडकमै चुडियो नयाँ घरको सपना’ « Online Rapti
‘सडकमै चुडियो नयाँ घरको सपना’
दाङ, २० जेठ : दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ पातेटाकुराका ३२ वर्षिय पूर्णबहादुर पुनले यस वर्ष गाउँमा नयाँ घर बनाउने योजना बुनेका थिए ।
आइतबार दिउँसो १ बजे भारतको बरेलीबाट जेठा दाजु भविश्वर पुनलाई फोन गरेर घर आउन लागेको खबर मात्रै सुनाएनन् नयाँ घरको योजनासमेत सुनाएका थिए । आफ्ना जेठा दाजु भविश्वरसँग लामो पारिवारीक गफसमेत गरेका थिए ।
पूर्णले दाजुसँग भनेका थिए ‘केही चिन्ता नलिनु होला भोलि बिहानसम्म घर आइ पुग्छौ, यो साल घर पनि बनाउनु छ, मिस्त्रीको पनि जोहो गर्दै गर्नुहोला ।
बुवा बिरामी हुनुहुन्छ ख्याल गर्नुहोला ।’ त्यतिबेलै उनले आफ्नो सबै परिवार घर आउन लागेको जानकारीसमेत गराएका थिए । तर पूर्णको घर पुग्ने सपना बाटोमै हरायो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अगैया नजिकै भएको सवारी दुर्घटनाले उनको ज्यान गयो । पूर्णबहादुरको तीनजनाको परिवार नै दुर्घटनाले रित्तियो ।
श्रीमती ३० वर्षिय सीता पुन छोरा ९ वर्षिय हिमाम्सु पुनको एउटै दुर्घटनामा परी ज्यान गयो । पूर्णबहादुरको परिवारले बिरामी बुवालाई भेट्ने इच्छा मात्रै हैन नयाँ घरमा बुवाआमालाई राख्ने सपना समेत सडकै बिलायो ।
दुर्घटनाको खबरले अहिले शान्तिनगर–३ पातेटाकुरा शोकमा डुबेको छ । एकै परिवारका तीनजनाको मुत्युको खबरले सबैलाई दुखद् बनाएको छ ।
परिवारका सदस्यहरु बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । सोमबार बेलुकासम्म पनि शव बुझ्न जान सक्ने अवस्थामा कोहि देखिएका थिएनन् ।
‘हामी चारजना दाजुभाइ मध्य कान्छो पूर्ण बहादुर हो’ दाजु भविश्वरले भने, ‘ऊसहित तीन भाइका परिवार भारततिरै बस्छन् ।
यसपटक बुवा बिरामी भएका कारण बुवाकै आग्रहमा पूर्णको र उसको परिवार घर आउन लागेको थियो, दैवले बाटोबाटै चुडेर लग्यो ।’ उनीहरु केही वर्षदेखि नै भारतको चण्डीगढमा काम गर्दै आएको उनले बताए ।
‘आइतबार दिउँसो फोन गरेर हामी आउँदैछौ भनेर सुनाएको थियो, बिहानसम्म आउँछन् भन्ने आशमा बसेका थियौं, दिउँसोसम्म पनि नआएपछि खोजबिन गर्दा समाचार सुनेर दुर्घटनामा परेको थाहा भयो’, भविश्वरले भने, दुर्घटनाले हाम्रो परिवार रित्यायो, बेलुकासम्ममा पनि बुवालाई यो सुनाउन सकेका छैनौं ।
भाइको घर बनाउने र बुवाको उपचार गर्ने सपना पूरा भएन उनले भने । ‘धेरै वर्ष भयो घर आएको थिएन’ स्थानीय तिलक पुनले भने, हामीलाई समेत यस वर्ष नयाँ घर बनाउने र परिवारलाई यतै राख्ने योजना सुनाएको थियो ।
हामी पनि उनीहरु आउने सूचनाले खुसी थियौं’, उनले भने, ‘घर आए होलान् भनेको मरेको खबर सुनियो । बुवाआमाको जिम्मासमेत पूर्णलाई थियो ।
‘उतैबाट बुवाआको रेखदेख उनैले गरिरहेका थिए’ उनले भने । उनीहरुसँगै दुर्घटनामा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमा चारजना दाङका नै परेका छन् ।
दाङको राजपुर गाउँपालिका–६ का रामकुमार पुनको समेत मुत्यु भएको छ । उनीहरु सबै कोरोनाबाट बाँचे तर सडक दुर्घटनामा मरे ।
दुर्घटनामा १२ को मृत्यु
दाङ, २० जेठ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्रमा भयानक सवारी दुर्घटना हुँदा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारतबाट घर फर्केका दाङ, सल्यान र रोल्पाका नागरिकले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन् ।
बाँकेको नेपालगञ्जबाट दाङ आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको राप्तीसोनारी–२ स्थित जंगलमा दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा ११ जना र उपचारको क्रममा एकजनाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी राजकुमार बैदवारले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा परि २१ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनास्थल अगैयादेखि १३ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
नेपालगञ्जबाट दाङ हुँदै सल्यान जान लागेको गरेको ना ५ ख ५९९५ नम्बरको बस रोकिराखेको बा ४ ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा ठोक्किदा दुर्घटना भएको एसएसपी बैदवारले बताए । चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भएको घाइते यात्रुहरूले बताएका छन् ।
उनका अनुसार ११ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । दुर्घटनामा परी २१ जना घाइते भएका छन् । घाइतेको नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
गाडी स्टाफ तीनजनासहित मुत्यु हुने सबैको सनाखत भइसकेको छ । दुर्घटना राति १२ बजे भएको हो । मृतकमध्ये गाडी चालक दैलेखका २८ वर्षीय दानबहादुर खड्का र सहचालक सुर्खेतका २२ वर्षीय पवनबहादुर भण्डारी, सहयोगी रितेश कार्की,
यात्रुहरू रोल्पा थवाङ–३ का भिम बहादुर विक, बुद्धिराम विक, नरेन्द्र विक, रोल्पा रुन्चेगढी–६ होलेरीका मोहनचन्द्र विक, दाङ शन्निगर–३ का पूर्ण बहादुर पुन, सीता पुन, हिमाम्सु पुन, राजपुर–६ का रामकुमार पुन र ठेगाना नखुलेका निमबहादुर ओली रहेका छन् ।
घाइतेमध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइते २१ जनामध्ये १० जना सल्यानका, ६ जना दाङका र ५ जना रोल्पाका रहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका– २ मा भएको दुर्घटनाका घाइते र मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाव संकलन गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । दुर्घटनापछि सोमबार बिहान १ बजे नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा ल्याइएको थियो ।
उनीहरूको बिहान स्वाव संकलन गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
घाइते सबैको कोरोना परिक्षण
बाँके, २० जेठ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भएको सवारी दुर्घटना परि घाईते भएका सबैको कोरोना परिक्षण गरिएको छ ।
सोमबार नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालको कोरोना प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. प्रकाश कुमार थापाले जानकारी दिए ।
आइतबार राति राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ ठुरिया जङ्गलमा भएको सवाी दुर्घटनामा परि घाइते भएका २१ जनाको परिचय खुलेको छ । दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा परि घाइते हुनेहरूमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ४ धर्ना का ४५ वर्षीय मेघराज केसी, तुलसीपुर उपमहानगरका ३९ वर्षीय विष्णु गिरी, वडा नं. २ का रूपलाल केसी, राजपुर गाउँपालिका वडा नं २ का जीवन घर्ती, वडा नं. ६ का २० वर्षीय दिपेश चौधरी रहेका छन् ।
यस्तै दाङका २० वर्षीय भरत थापा, रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ७ का १७ वर्षीय सुनिल परियार, सोहि ठाउँका २० वर्षीय विरेन्द्र परियार, १८ वर्षीय पुरन परियार घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा परी रोल्पा जिल्ला कुरैती गाउँपालिका वडा नं २ का ५२ वर्षीय नरबहादुर विक, रोल्पा टुटु–८ का ४० वर्षीय दिल बहादुर विक, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सल्यानका २० वर्षीय मिनराज विक, सिद्धकुमाख गाउँपालिका वडा नं ४ का २८ वर्षीय लोकेश घर्ती,
वडा नं. ५ का २६ वर्षीय निम बहादुर वादी, सोही ठाउँ निवासी १८ वर्षीय देवेन्द्र बुढाथोकी, १७ वर्षीय ज्ञान बहादुर बोहरा, शारदा गाउँपालिका वडा नं ६ का टीका चलाउने घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा परि घाइते हुनेहरूमा सल्यान जिल्लाकै १८ वर्षीय धन बहादुर बोहरा, ५२ वर्षीय दिप बहादुर बुढा र शिव भण्डारी रहेका छन् । यो समाचार प्रदेश टुडे पत्रिकामा छापिएको छ ।